Iinqathi ezosiweyo ngebhotolo kunye nobusi | Ukupheka kweKhitshi
Iminqathe yimifuno ukukhanya kwaye kugayeka ngokulula zombini ziluhlaza kwaye ziphekiwe. Ukutya okunempilo kakhulu ngenxa yomxholo wayo we-beta-carotene (provitamin A). Namhlanje kwiiRipespe de cocina siyayilungiselela igcadiwe isongelwe ngobumnandi bebhotolo kunye nobusi.
Iikherothi zilungiso olukhulu lwenyama kunye nentlanzi. Ezi yobusi iminqathe Abayi kushiya nabani na ongakhathaliyo ngenxa yencasa nobumnandi babo obuqinisekileyo, ndiyakuqinisekisa! Ungasebenzisa naziphi na iindidi zeminqathe, nangona kunjalo olwahlukileyo usana lolona "luthandana" ukuba ufuna ukubonisa isitya nakweyiphi na imibhiyozo.
Iminqathe yobusi eyosiweyo iyinto entle yokuhombisa inyama kunye nentlanzi.
I-6 yeminqathe, exutywe
Iipunipoli ezi-2 zanyibilika ibhotolo (okanye ioyile eyongezelelweyo)
Iipunipoli ezi-2 zenqatha yobusi (okanye naluphi na olunye uhlobo)
2 iisupuni zeparsley ecoliweyo
Silungiselela i i-oveni ngo-200ºC
Kwisitya sidibanisa ibhotolo inyibilikile, ubusi, igalikhi egalelweyo kunye ne prejil. Ixesha kunye nokudibanisa.
Sthambisa iminqathe ngomxube kwaye uzilungiselele kwitreyi ye-oveni, efakwe iphepha lokubhaka.
Sigalela ngaphezulu komxube ongaphezulu kunye sithatha i-oven malunga nemizuzu engama-25.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Iiresiphi zemifuno » Ubusi izaqathe
Inkukhu yenkukhu kunye nesinamoni
Iinanapple carpaccio enobusi kunye neerasentyisi